रासायनिक मल अकार्बनिक पदार्थबाट सिंथेटिक रूपमा उत्पादन भइरहेको छ, भौतिक वा रासायनिक विधिहरूको साथ बोटबिरुवाको विकासको लागि पोषक तत्व प्रदान गर्ने पदार्थ हो।
रासायनिक मलको पोषक
रासायनिक मलहरू बोटको वृद्धिलाई आवश्यक पर्ने तीनवटा आवश्यक पोषक तत्वहरूमा धनी हुन्छन्। मलका प्रकारहरू महान प्रकारका हुन्छन्। रासायनिक मलहरूको केही उदाहरणहरू हुन्: अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड आदि।
NPK मलहरू के हो?
☆ नाइट्रोजन मल
बोटको जराले नाइट्रोजन मललाई अवशोषित गर्न सक्दछ। नाइट्रोजन प्रोटीनको मुख्य घटक हो (केहि एन्जाइमहरू र कोएन्जाइम सहित), न्यूक्लिक एसिड र फास्फोलिपिडहरू। तिनीहरू प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस र बायोफिल्मको महत्त्वपूर्ण अंगहरू हुन्, जसले बोटको महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूमा विशेष भूमिका खेल्दछन्। नाइट्रोजन क्लोरोफिलको एक घटक हो, त्यसैले यसले प्रकाश संश्लेषणसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्छ। नाइट्रोजनको मात्राले सेल कोष र विकासमा सीधा असर गर्दछ। तसर्थ, नाइट्रोजन मलको आपूर्ति को आवश्यकता छ। यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट र अमोनियम सल्फेट कृषिमा सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ।
Osp फास्फेटिक मल
फास्फोरसले जरा, फूल, बीउ र फलको विकासलाई बढावा दिन सक्छ। फास्फोरस विभिन्न चयापचय प्रक्रियामा भाग लिन्छ। फास्फोरस meristems मा धनी छ, जो सबै भन्दा अधिक उत्पादक जीवन गतिविधिहरु छन्। त्यसकारण, पी मलको प्रयोगले टिलर, हाँगा र जराको बृद्धिमा राम्रो प्रभाव पार्छ। फास्फोरसले कार्बोहाइड्रेटको रूपान्तरण र यातायातको प्रचार गर्दछ, बीउ, जरा र कन्दहरूको विकासलाई सक्षम बनाउँछ। यसले बालीको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ।
Ass पोटासिक मल
पोटासिक मल डाँठ वृद्धि, पानीको आन्दोलन र फूल फुल्ने र फलफूलको प्रवेगको लागि प्रयोग गरिन्छ। पोटासियम (के) बोटमा आयोनको रूपमा हुन्छ, जुन बोटको जीवनको सबैभन्दा उत्पादनशील भागहरूमा केन्द्रित हुन्छ, जस्तै बढ्दो बिन्दु, क्याम्बियम र पातहरू, इत्यादि। पोटेशियमले प्रोटीनको संश्लेषणलाई बढावा दिन्छ, चिनीको यातायातलाई सजिलो बनाउँछ र कोषहरूलाई सुनिश्चित गर्दछ। पानी अवशोषण।
रासायनिक मलबाट फाइदाहरू
रासायनिक मलहरूले बिरूवाहरू बढ्न मद्दत गर्दछ
तिनीहरूले एक वा बढी आवश्यक वृद्धि पोषकहरू जस्तै नाइट्रोजन, फास्फोरस, र पोटेशियम र अन्य अन्य समावेश गर्दछ। एक पटक माटोमा थपिएपछि, यी पौष्टिक तत्त्वहरूले बिरूवाहरूको आवश्यक मागहरू पूरा गर्दछन् र उनीहरूलाई पोषक तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको स्वाभाविक रूपले अभाव थियो वा हराएको पोषकतत्व कायम राख्न सहयोग गर्दछ। रासायनिक मलले पोषकतत्वको अभाव हुने माटो र बोटबिरुवाहरूको उपचार गर्न एनपीकेको विशिष्ट सूत्रहरू प्रदान गर्दछ।
रासायनिक मल उर्वरक मल भन्दा सस्तो भइरहेको छ
रासायनिक मलमा जैविक मलहरू भन्दा धेरै कम खर्च हुन्छ। एकातिर, जैविक मल उत्पादन प्रक्रियाबाट देखी। जैविक मलहरू किन महँगो हुन्छन् भन्ने कारण पत्ता लगाउन गाह्रो छैन: मलमा प्रयोग गर्न जैविक सामग्री फसल गर्न आवश्यक छ, र सरकारी नियामक एजेन्सीहरू द्वारा प्रमाणित जैविकको उच्च लागत।
अर्कोतर्फ, रासायनिक मलहरू सस्तो हुन थालेका छन् किनकि उनीहरूले प्रति पौंड तौल बढी पोषकहरू प्याक गर्दछन्, जबकि त्यस्तै पोषक तत्वहरूको लागि अधिक जैविक मलहरू चाहिन्छ। एकै पाउण्ड रासायनिक मलले प्रदान गर्ने समान माटो पोषक तत्वहरू प्रदान गर्न कसैलाई धेरै पाउन्ड जैविक मलको आवश्यकता हुन्छ। ती २ कारणले सिधै रासायनिक मल र जैविक मलको प्रयोगलाई प्रभाव पार्दछ। केही रिपोर्टले यु.एस. उर्वरक बजार लगभग $० बिलियन डलर हुने सुझाव दिएका छन् जसमध्ये जैविक मलहरू about० मिलियन डलर मात्र कब्जा गर्छन्। बाँकी यो विभिन्न कृत्रिम मलहरूको अंश हो।
तत्काल पोषण प्रदान गर्दै
तत्काल पोषण प्रदान गर्ने र कम खरीद लागत धेरै अजैविक मलहरूको लोकप्रिय। रासायनिक मल धेरै फार्म, यार्ड र बगैंचामा प्रमुख बनेको छ, र एक स्वस्थ लन केयर रूटीनको एक प्रमुख घटक हुन सक्छ। यद्यपि रासायनिक मलले माटो र बोटलाई हानि गर्दैन? के त्यहाँ रासायनिक मलको प्रयोगमा ध्यान दिनको लागि केहि चीजहरू छैनन्? उत्तर पक्कै होईन!
सिंथेटिक मलको प्रयोगको वातावरणीय प्रभाव
भूमिगत जल स्रोतमा प्रदूषण
रासायनिक मल उत्पादन गर्न प्रयोग हुने केही सिंथेटिक यौगिकहरूले नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पार्न सक्दछ जब पानीको स्रोतमा सञ्चालन हुन दिईन्छ। खेत जग्गाबाट सतहको पानीमा बग्ने नाइट्रोजनले मानव गतिविधिहरूको %१% हिस्सा ओगटेको छ। अमोनिया नाइट्रोजन र नाइट्रेट नदी र तालहरूमा मुख्य प्रदूषक हुन्, जसले युट्रोफिकेशन र भूजल प्रदूषण निम्त्याउँछ।
माटो संरचना नष्ट गर्दै
Chemical रासायनिक मलको दीर्घकालीन र ठूलो मात्रामा प्रयोगको साथ, केहि वातावरण समस्याहरू देखा पर्नेछ, जस्तै माटोमा अम्लीकरण र क्रस्ट। जैविक मलको सट्टा नाइट्रोजन मलको मात्रा प्रयोग गर्ने भएकोले केही उष्णकटिबन्धीय जमिन गम्भीर माटोको क्रस्टमा छ, जसले गर्दा अन्ततः खेतीपातीको मूल्य नै गुम्छ। माटोमा रासायनिक मलको प्रभाव महान र अपरिवर्तनीय छ।
Chemical रासायनिक मलको दीर्घकालीन उपयोगले माटोको पीएच परिवर्तन गर्न सक्दछ, लाभदायक माइक्रोबियल इकोसिस्टमलाई दु: खी गर्न सक्छ, कीरा बढाउन सक्छ, र ग्रीन हाउस ग्यासको रिलीजमा पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
● धेरै प्रकारका अजैविक मलहरू अत्यधिक अम्लीय हुन्छन् जसले फलस्वरूप माटोको अम्लता बढाउँदछ, जसले फलदायी जीवहरू र स्टन्टि plant प्लान्ट बृद्धिलाई कम गर्दछ। यस प्राकृतिक इकोसिस्टमलाई खलबल्याएर कृत्रिम मलको दीर्घकालीन उपयोगले अन्ततः प्राप्तकर्ता बोटहरूमा रासायनिक असंतुलन निम्त्याउन सक्छ।
Eated दोहोर्याइएको अनुप्रयोगहरूले माटोमा आर्सेनिक, क्याडमियम, र युरेनियम जस्ता रसायनहरूको विषाक्त निर्माणको परिणाम दिन्छ। यी विषाक्त रसायनहरूले अन्ततः तपाईंको फल र तरकारीहरूमा प्रवेश गर्न सक्दछन्।
मलको प्रयोगको बारेमा केही व्यावहारिक ज्ञान पादा मलको खरीदमा अनावश्यक फोहोरबाट बच्न र बालीको उत्पादन बढाउन सक्दछ।
माटो विशेषताहरु अनुसार मल छनौट गर्दै
मल किन्नु अघि माटोको pH राम्ररी जान्नु आवश्यक छ। यदि माटो कपडा छ भने, हामी जैविक मलको उपयोग बढाउन सक्दछौं, नाइट्रोजनसको नियन्त्रण राख्दछौं र फास्फेटिक मलको मात्रा रहन्छौं।
सह-प्रयोग गर्दै जैविक मल
कृषि प्रयोग गर्नको लागि यो सार हो जैविक मल र रासायनिक मल। अध्ययनहरूले देखाए कि यो माटो जैविक पदार्थ कारोबारका लागि लाभदायक छ। जैविक मल र रासायनिक मलको प्रयोगको साथ, माटो जैविक पदार्थ अपडेट हुँदैछ र माटो केसनको आदानप्रदान क्षमता सुधार भएको छ, जसले माटोको एन्जाइम गतिविधि सुधार गर्न र बाली पोषण शोषण बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले बालीको गुणस्तर सुधार्न, प्रोटीन, अमीनो एसिड र अन्य पोषक तत्वहरूको सामग्री बढाउन, तरकारी र फलफूलमा नाइट्रेट र नाइट्राइट सामग्री कम गर्न मद्दत गर्दछ।
निषेचनको सही विधि छनौट गर्दै
निषेचन प्रविधिको र वातावरणीय अवस्थामा, तरकारी र बालीको नाइट्रेट सामग्री र माटोमा नाइट्रोजनको प्रकार निकट सम्बन्धित छ। माटोमा नाइट्रोजनको उच्च सांद्रता, तरकारीमा उच्च नाइट्रेट सामग्री, विशेष गरी पछिल्लो अवधिमा। त्यसकारण, रासायनिक मलको प्रयोग प्रारम्भिक हुनुपर्दछ र धेरै हुनु हुँदैन। नाइट्रोजनयुक्त मल फैलिनका लागि उपयुक्त छैन, अन्यथा अस्थिरकरण वा घाटामा परिणाम हुन्छ। कम गतिशीलताको कारण, फास्फेटिक मल गहिरा ठाउँमा हुनुपर्दछ।
रासायनिक मलले बोटबिरुवाहरू बढ्नमा ठूलो समर्थन गर्दछ, जबकि वातावरणमा पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ।
भूगर्भीय जल प्रदूषण र रसायनिक मलले ल्याउने वातावरणीय मुद्दाहरूको जोखिम छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको खुट्टा मुनि पृथ्वीमा के भइरहेको छ भनेर बुझ्नुहुन्छ, ताकि तपाईले आफ्नो छनोटलाई सचेततापूर्वक बनाउनु हुनेछ।
रासायनिक मल प्रयोग गर्ने सिद्धान्त
रासायनिक मल लागूको मात्रा घटाउनुहोस् र जैविक मलसँग जोडिनुहोस्। स्थानीय माटो अवस्था अनुसार पोषण निदान गर्नुहोस् र वास्तविक आवश्यकता अनुसार मल प्रयोग गर्नुहोस्।